Shiica - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Shi'a)
Shiica (ingiriis: Shia; carabi: شيعة‎ "Shīʿah") waa waaxda labaad ee ugu weyn diinta Islaamka. Ereyga Shiica waxa laga keenay Shīʻatu Calī (شيعة علي) micnaheedu yahay "raacayaashii" ama "taageerayaashii" asxaabigii Cali bin Abi Dalib, ee nabi Muxamed (N.N.K.H) ilma-adeerka ahaayeen. Shiicadu waxay aaminsan yihiin in Cali bin Abi Daalab ahaa hogaamiyaha saxda ah ee diinta Islaamka geeridii Nabi Muxamed wixii ka dambeeyay. Sidoo kale farqiga u dhexeeya Shiicada iyo Sunniga waxaa ugu weyn waa siyaasad (cida saxda ah ee hogaanka diinta Islaamka qaban lahayd) iyo taageerada Cali bin Abi Daalab.
Kani waa maqaal ku saabsan mabda'a Shiicada ee qeybta ka ah diinta Islamka.
Shiicadu waxay u kala baxdaa dhowr qeybood oo leh xoogaa kala duwanaansho ah. Dadka raacsan mabda'a "Labo-iyo-tobanle" (îthnā'ashariyyah) ayaa ah firqada ugu weyn ee Shiicada. Tiro koob la sameeyay 2009kii ayaa lagu ogaadey in Shiicadu tahay 13% shacabka Islaamka caalamka; in 14% ay ka tahay muslimiinta bariga-dhexe; iyo in 70% ilaa 80% Shiicada caalamka oo dhan ku nool yihiin afar wadan oo kala ah: Iiraan, Ciraaq, Hindiya iyo Bakistaan.
Mabda'a Shiicadu wuxuu ku salaysan yahay kitaabka Quraanka iyo xadiisyadii laga soo weriyey Nabi Muxamed ((NNKA); iyo buugaag ay qoreen culimo-diin, sida "Nahj al-Balagha". Intaas waxaa dheer in Shiicadu aaminsan tahay in Cali bin Abi Dalib ahaa hogaamiyaha ugu saxsan ee ku xiga Nabi Muxamed, ka dib ay ku sii xigi lahaayeen "Imaamyada". Sidoo kale waxaa Shiicadu leedahay xadhig dheer oo qadariya " dadka ku ehelka ah Nabi Muxamed" (loo yaqaano "ahlul al-Bayt"), kuwaasi oo la maamuso ama qadariyo ilaa maanta.
Guud ahaan Shiicada waxaa loo qeeybiyaa sadex waaxood: Labo-iyo-tobanle (īthnā'ashariyyah), Ismà'cīīli iyo Sacīidi; waxaana ugu weyn oo badan Labo-iyo-tobanlayaasha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiica&oldid=218377"
Last edited on 6 Oktoobar 2021, at 19:11
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Oktoobar 2021, marka ee eheed 19:11.